Graava: fakantsary an-tsary manan-tsaina izay manitsy azy ho azy | Martech Zone
Graava: Fakan-tsary an-tsary manan-tsaina izay manitsy azy ho azy
Zoma, Aogositra 7, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny 2012 Bruno Gregory dia voadonan'ny fiara teo am-bisikiletany. Nandao ilay hita ilay mpamily fa i Bruno kosa afaka nahafantatra sy nahatameloka ilay mpamily satria nanana fakantsary izy nandrakitra ny hetsika. Ny taona manaraka dia tonga ny hevitra hampiasa sensor sy hianarana milina hamoronana fakan-tsary izay maka sary azy fotsiny izay zava-dehibe fa tsy handrakitra horonantsary horonan-tsary tsy ilaina intsony, avy eo mila manitsaka izany mba hanitsy ireo fotoana niavaka.
Ny vokany dia Graava, fakantsary manana famaritana avo lenta (1080p 30fps) izay misy GPS, Wi-Fi, Bluetooth, accelerometer, sensor gyro, microphones avo lenta 2, sensor sensor, sensor sary, mpandahateny ary fanaraha-maso ny tahan'ny fo tsy voatery. Ny fakan-tsary dia mahatohitra rano ary manana slot micro SD sy slot micro HDMI.
Ity misy sary an-tsaina ny fomba hamaritan'i Grava ilay horonan-tsary hitehirizana
Ary ity ny 30 segondra tsara indrindra, atambaro amin'ny mozika amin'ny alàlan'ny fampiharana.
Ny fampiharana Graava dia ahafahanao mizara ny horonan-tsarinao, mamerina azy ireo, mifehy ny fakan-tsary lavitra ary mifehy ny fikirakiran'ny fakantsary.
Tags: fakan-tsary +graavaLahatsary Marketingmpitam-boky
Fampivarotana finday: Ento miaraka amin'ireo paikady 5 ireto ny varotrao
Ahoana ny fampiasana media sosialy ho an'ny orinasa kely